दिल्ली क्यापिटल्सद्वारा कोलकाता नाइट राइडर्स ७ विकेटले पराजित – Tu Khabar Online
Home / अन्तराष्ट्रिय / खेलकुद / दिल्ली क्यापिटल्सद्वारा कोलकाता नाइट राइडर्स ७ विकेटले पराजित
admin April 13, 2019	खेलकुद Leaveacomment 161 Views
एजेन्सी । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) को २६ औं खेलमा कोलकाता नाइट राइडर्सलाई ७ विकेटले पराजित गर्दै दिल्ली क्यापिटल्स विजयी बनेको छ । कोलकाताले प्रस्तुत गरेको १ सय ७९ रनको लक्ष्य दिल्लीले १८.५ ओभरमा ३ विकेटको क्षतिमा प्राप्त गर्दै शानदार जित हात पारेको हो ।
टस जितेर फिल्डिङ गरेको दिल्लीका लागि ओपनर शिखर धवनले नटआउट ९७ रन जोड्दै खेल रोमाञ्चक बनेको थियो । धवनले ६३ बलमा ११ चौका र २ छक्का प्रहार गरे । अर्का ओपनर पृथ्वी शाले ७ बलमा १४ रन जोडे । उनले २ छक्का प्रहार गरेका थिए ।
ऋषभ पन्तले ३१ बलमा ४ चौका र २ छक्कासहित ४६ रन जोडे । धवनसँग पन्तले १ सय ५ रनको साझेदारी गरेपछि दिल्ली सहज जितको लक्ष्यमा थियो । पन्तलाई नितिश रानाको बलमा क्याच आउट गराए । कोलिन इन्ग्रामले ६ बलमा १ चौका र छक्कासहित १४ रन जोडे । कोलकाताका लागि नितिश राना, प्रशिध कृष्णा र आन्द्रे रसलले १(१ विकेट लिए । कप्तान श्रेयस ऐर ६ रनमा समित रहे ।
त्यसअघि कोलकाताले निर्धारित २० ओभरमा ७ विकेट गुमाउँदै १ सय ७८ रन जोडेको थियो । कोलकाताको खेलमा दिल्लीका लागि सन्दीपको स्थान लिएका किमो पलले ४ ओभरमा ४६ रन खर्चेर २ विकेट हात पारे । क्रिस मोरिस र कागीसो रबाडाले पनि २-२ विकेट लिएका थिए ।
ओपनर शुभ्मन गिलले ३९ बलमा ७ चौका र २ छक्का प्रहार गर्दै ६५ रन बनाए । इनिङसको पहिलो बलमा अर्का ओपनर जो डेनली भने आउट भए ।आन्द्रे रसलले २१ बलमा ३ चौका र ४ छक्कासहित ४५ रन जोडे । रोविन उथाप्पाले ३० बलमा ४ चौका र १ छक्कासहित २८ रन बनाए नितिश रानाले ११, कप्तान दिनेश कार्तिकले २ तथा कार्लोस ब्रेथवेटले ६ रन जोडे । तल्लोक्रममा पियुष चावलाले ६ बलमा १४ रन जोड्दै नटआउट रहे ।
Previous आजको राशिफल : चैत्र ३० गते, शनिबार
Next बुलेट प्रुफ गाडिमा २ बडीगार्ड सहित हिँड्ने यो हो विश्वकै महंगो कुकुर ! कति तोकियो टाउकोको मूल्य ? सुन्दा चकित पर्नुहुनेछ